प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डप्रति असन्तुष्टि
मञ्जु टेलर काठमाडौं
२०७८ असार ७ सोमबार ०७:५८:००
नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणभन्दा क्षेत्रफल, जनशक्तिजस्ता विषयमा नयाँ मापदण्ड केन्द्रित भएको प्रयोगशाला सञ्चालकहरूको आरोप
मञ्जु टेलर, काठमाडौं
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ अन्तर्गत जारी गरेको ‘प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड’प्रति प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विनाछलफल र अपग्रेडका लागि पर्याप्त समय नै नदिई प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको उनीहरूको गुनासो छ । आवश्यक छलफलविनै आफैँमा बाझिने बुँदा समावेश गर्दै कसैको स्वार्थका लागि ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालालाई लक्षित गरी मापदण्ड ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ । ‘स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०७३’ मा संशोधन गरी नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक भएको हो ।
प्रयोगशालाको क्षेत्रफल, जनशक्ति र परीक्षणको दायराअन्तर्गतका बुँदाहरू नै एक–आपसमा बाझिएका छन् । ‘ए’ वर्गको ल्याबको हकमा कम्तीमा चार सयवटा परीक्षण आवश्यक गरिएको छ । क्यान्सर र अन्य विभिन्न रोगका रेजेन्ट्सहरू परीक्षणका लागि विदेश पठाइने गरिन्छ । ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध भए पनि नमुनाहरू बाहिर रिफर गरिन्छन् । परीक्षणका लागि महँगो शुल्कमा बाहिर पठाइने प्रवृत्ति नियन्त्रणभन्दा पनि नयाँ मापदण्ड क्षेत्रफल, जनशक्तिजस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।
प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी जारी गरिएको नयाँ मापदण्डमा ‘ए’ वर्गलाई मात्र लक्षित गरी कार्यविधि ल्याइएको छ । नयाँ थपिएका अधिकांश परीक्षण ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालाले मात्र परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा ‘ए’ वर्गका १९, ‘बी’ ५०, ‘सी’ २२३ र ‘डी’ वर्गका १३९ वटा प्रयोगशलाहरू छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार केही विशेष सेवाबाहेक ‘ए’ वर्गको तुलनामा ‘बी’ वर्गका ल्याबहरूमा बढी परीक्षण भइरहेका छन् । सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने भएकाले समेत ‘बी’ वर्गमा तुलनात्मक रूपमा आममानिसले बढी सेवा लिएको पाइन्छ ।
डा. रुना झा, निर्देशक
नयाँ मापदण्डअनुसार अपग्रेड गर्न चाहने प्रयोगशालाहरूका लागि भदौ मसान्तसम्म समय बढाउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । मापदण्ड लागू भए पनि ल्याबको वर्ग तलमाथि हुन सक्छ । अस्पतालहरूमा आधारित ल्याबहरू पनि यसमा पर्ने भएकाले अस्पतालहरूको मापदण्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे थप छलफल भइरहेको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार सेवा दिन हालका ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालाहरू सक्षम नभएको मानिन्छ । नयाँ मापदण्डअनुसार प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा ल्याउन शतप्रतिशत अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आवश्यक छलफलविनै कार्यविधि ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।
मापदण्डमा पहिलो नम्बरमै प्रयोगशालाको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । जसमा ‘ए’ ग्रेडको ल्याबमा चार हजार स्क्वायर फिट हुनुपर्ने, ‘बी’ ग्रेडमा १५ सय स्क्वायर फिट र बाँकी सी, डी र ईमा पुरानै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर ‘ए’ वर्गमा क्षेत्रफलको दायरा दोब्बर बढाउँदा बी वर्गमा भने जम्मा पाँच सय स्क्वायर फिट बढाइएको छ ।
‘ए’ वर्गको प्रयोगशाला चार हजार स्क्वायर फिट हुँदा ‘बी’ को ल्याब कम्तीमा पनि तीन हजार स्क्वायर फिटको हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘ए’ र ‘बी’ को क्षेत्रफलको हकमा धेरै फरक हुनु अवैज्ञानिक भएको स्वास्थ्यविज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘ए’ वर्गको प्रयोगशालामा इम्युनोफ्लोरेन्स, हिस्टोप्याथोलोजी, फ्लोसाइटोमेट्रीजस्ता सेवाहरू हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यी सेवाहरू बी ग्रेडका प्रयोगशालामा समावेश गरिएको छैन, तर परीक्षण भने गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् आवश्यक उपकरण र मापदण्ड नै नभएका बी ग्रेडहरूले पनि यस्ता सेवा दिन सक्छन्, जुन मापदण्ड आफैँमा बाझिएको छ । धेरैजसो अस्पतालअन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमै परीक्षण हुने र बी ग्रेडका प्रयोगशालाहरूले भारत रिफर गर्ने परीक्षणसमेत अत्यावश्यक गरिएको बताउँछन् सिनियर मेडिकल ल्याब टेक्निसियन ईश्वर लामिछाने ।
जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा पनि विवाद
‘ए’ वर्गको प्रयोगशालामा न्यूनतम प्राविधिक जनशक्ति ३० जना र बी वर्गको हकमा न्यूनतम १२ जना हुनुपर्ने जनाइएको छ । योसँगै ‘ए’ वर्गको हकमा बायोकेमेस्ट्री, सेरोलोजी र इम्युनोलोजीजस्ता मेसिनहरूले छिटोछरितो सेवा दिन एक घन्टामा कम्तीमा दुई सयवटा टेस्ट गर्न सक्ने अटोमेसिनहरू आवश्यक गरिएको छ । तर, ल्याब सञ्चालकहरूले भने कर्मचारी राख्ने सम्बन्धमा मापदण्डमै अनिवार्य गरिनु बाध्यात्मक भएको बताएका छन् ।
मोडर्न डायग्नोस्टिक ल्याबका सञ्चालक शिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘ल्याबमा आउने स्याम्पल लोडका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ल्याबहरूले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने हो । सरकारीस्तरबाट जबर्जस्ती नियम बनाइँदा कर्मचारीका लागि पर्ने खर्चसमेत परीक्षण शुल्कमा जोड्नुपर्ने हुन्छ, यसको सीधा असर आममानिसमा पर्छ । कार्यविधि ल्याउनुपूर्व कम्तीमा विज्ञहरूको सल्लाह गर्नुपर्ने थियो ।’
कोरोना माहामारीको समयमा तोकेका सामान ल्याएर नयाँ मापदण्डअनुसार ल्याब बनाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘ल्याबमा प्रयोग हुने मेसिन तथा टेस्ट किटहरू युरोपियन सिई वा युएस एफडिए मान्यताका गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने बताइएको छ । लकडाउनको समयमा यी सबै उपकरणहरू ल्याएर सेवा सञ्चालनमा ल्याउन निकै समय लाग्छ । यसका लागि दुई–तीन वर्ष समय लाग्न पनि सक्छ, तर सरकारले वैज्ञानिक तरिकाबाट आवश्यक छलफल नै नगरी मापदण्ड ल्याउनुले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।नयाँ मापदण्ड आममानिसको सेवाका लागि भन्दा पनि कुनै व्यक्तिको पक्षमा ल्याएजस्तो देखिन्छ ।’
क्षेत्रफल, जनशक्ति र उपकरणहरूसहित ल्याब सञ्चालनमा ल्याए पनि स्याम्पल परीक्षणका आपसमा समन्वय नहुँदा उपलब्ध मेसिनहरूसमेत थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ल्याब अपग्रेडका आवश्यक छलफल भइरहेको र वर्गमा फरक पर्दा सेवासुविधामा असर नपर्ने जनाएको छ ।
साम्राज्यवादको अर्को कडी : प्रयोगशाला चुहावट सिद्धान्त
नेपालमा २५ लाखले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप, ९० प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण
सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट र पिसिआर प्रयोगशाला बनाउन देउवाको आग्रह
विदेश जानेको पिसिआर परीक्षणमा राहत : विदेश जानेले ‘क’ वर्गका सबै प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गराउन पाउने
गुल्मीको कोभिड– १९ प्रयोगशाला बन्द, पिसिआर परीक्षणमा बुटवलको भर
कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशालाका १० कर्मचारीले पाएनन् पारिश्रमिक
५० लाख नदिए जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गर्ने धम्की दिने तीन महिला पक्राउ
नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादक देवकोटासहित चार सञ्चारकर्मीद्वारा सरकारी पदक अस्वीकार
बेलायतको संसदीय बैठकमा किन रोकिए चिनियाँ राजदूत ?
सेयर बजारमा ‘क्लब हाउस इन्फ्लुएन्स’
माओवादी कर्मचारी संगठनको असन्तुष्ट हिस्सा एमालेमा
के चिनियाँ राष्ट्रपति सी बिरामी छन् ?
आइसिसी विश्वकप लिग २ : नेपालले ओमानलाई सात विकेटले हरायो
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह जनकपुरमा
एमालेमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव, ७० वर्षे उमेरहद पनि राखिने
ओमानले नेपाललाई दियो १२२ रनको लक्ष्य
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री कार्की (भिडियोसहित)